Sonke Siyinqaba | Martech Zone
NgoMsombuluko, Septemba 26, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lapho nje ngibona ukuthi kunamakhophi alinganiselwe kuphela we- Sonke Siyinqaba okuthengiswayo, bengazi ukuthi kufanele ngi-oda ikhophi. Le yincwadi yakamuva kaSeth Godin futhi imanifesto encane enhle kakhulu.
Kusuka emkhonweni wangaphakathi: Impikiswano kaGodin ukuthi ukukhetha ukusicindezela sonke siye kokujwayelekile ukuze sisize ukuthengisa imfucumfucu engaphezulu kubantu akusebenzi futhi akulungile. Ithuba lesikhathi sethu ukuxhasa okuxakile, ukuthengisa kwabangajwayelekile futhi, uma ufisa, ube yinqaba.
Okuhambisana nokuqukethwe yilo mdwebo obonisa lokho okuchazwa nguSeth Godin. Ukuhwebelana kwembulunga yonke, ukusatshalaliswa okungabizi kakhulu, kanye nokukhulumisana okwandisiwe kusenze sakwazi ukuba yizinto ezixakile njengathi empeleni kukhona. Akudingeki ukuthi sibe ngabantu abajwayelekile - singathola abantu abanezintshisekelo, izinto zokuzilibazisa nabathandayo njengathi kuzo zonke izingxenye zomhlaba.
Njengoba kusebenza ekukhangiseni kwanamuhla, umyalezo wencwadi ubucayi ngombono wami. Baningi kakhulu laphaya abasebenzisa imithombo yezokuxhumana njenge esinye nje isiteshi. Isitatimende engisizwa ngaso sonke isikhathi futhi akulungile neze. Kuphela esinye nje isiteshi lapho ufisa ukuchitha isikhathi sakho uzama ukuthengisa indlela eyodwa ngayo. Ukuqondisa out akuyona iqhinga ekahle ngemithombo yezokuxhumana.
Izinkampani zinezinsizakusebenza kanye nethuba lokunikeza uyinqaba nendawo yokubutha, yokwabelana, nokuxhumana. EzikaChar-Broil umphakathi wezenhlalo awukho ngokuthengisa ama-grills, kumayelana nokuhlanganisa umphakathi wabantu onentshisekelo yawo yokugcoba ucishe ube owenkolo. Lapho lo mphakathi uchuma, bayawuthokozela umkhiqizo owanikeze ithuba futhi, ekugcineni ukuthengisa kuzolandela.
Indawo inkampani yakho eyenzela abantu abangajwayelekile ukuhlela akudingeki nokuthi ihambisane nomkhiqizo noma insizakalo. Ezinye izinkampani zenza umsebenzi omuhle wokukhuthaza imibuthano yokuzijabulisa ezungeze umphakathi, isisa, umcimbi noma enye inhloso ejwayelekile.
I-ejensi yethu itshala kakhulu kule bhulogi, uchungechunge lwethu lwamavidiyo, uhlelo lwethu lomsakazo, futhi luxhasa imicimbi yesifunda neyesizwe ehlose abantu abaxakile njengathi abathanda ukusebenzisa ubuchwepheshe bokumaketha. Siyaxaka… singathanda ukukhuluma ngekhodi, ama-API, izinhlelo zokusebenza ze-beta, analytics futhi ezishintshayo kunezinye izihloko zokumaketha. Asikhulumi kakhulu ngezindaba ze-Facebook, i-Google + noma ze-Twitter… lezo zihloko zinjalo evamile futhi ungathola amabhulogi angamakhulu ambalwa elwela lowo mgwaqo!
Yincwadi enhle kangaka. Ngiyazithanda izincwadi ezicacisa lokho esikwenzayo futhi ezisiphoqelela ukuthi sisebenze kanzima kukho. Njengoba uSeth esho, Inhloso ukuthola nokuhlela nokubhekelela nokuhola isizwe sabantu, samukele ukuxaka kwabo, hhayi ukulwa naso. Ngiyethemba ukuthi siyaqhubeka nokwenza lokho!
Ukuqhubeka nokukhuthaza le ngxoxo, sicela ujoyine ikhasi lethu le-Meetup bese ubhalisela incwadi yethu yezindaba (ngenhla). Awudingi ukuba uvela e-Indianapolis yize imicimbi yesifunda yonke ithunyelwe lapho. Sizoqala ukuba nama-webinar athile nemicimbi ebonakalayo maduzane - mhlawumbe eyokuqala, njenge Iphrojekthi yeDomino izicelo, ukwaba nokuxoxa ngale ncwadi!
Izifundo Ezi-7 Ozifundile Ekukhuthazeni Ukubhala Kwakho
Ama-CSS3 Corners, Gradients, Shadows nokuningi…
Sep 26, 2011 ngo-7: 49 PM
Kuzwakala kakhulu kimi njengezinto uDan Kennedy abekhuluma ngazo kumavidiyo akhe akamuva. Ngiyaqiniseka uma amabhizinisi amaningi / abanikazi bebhizinisi beyeka ukuzama ukufana nawo wonke umuntu futhi bavele bagxila ezimfanelweni zabo ezihlukile futhi babelana ngendaba yabo eyingqayizivele nombono, lapho-ke bazobona umkhiqizo wabo weqiniso uvela ngokuzenzakalela futhi ngokomzimba. Le ncwadi noDani babonakala bekuqinisekisa lokhu. Ngidinga ukubamba ikhophi yencwadi kaSeth!
Sep 26, 2011 ngo-8: 10 PM
Scott, kuzofanele ngihlole uDan Kennedy ngaleso sikhathi! Ngingathanda ukubona eminye imininingwane yokujula nengxoxo ngesihloko.